रिसेप्सनिस्ट ! १ सय ९३ करोड तलब बुझ्छिन्  Sourya Online
रिसेप्सनिस्ट ! १ सय ९३ करोड तलब बुझ्छिन्
सौर्य अनलाइन २०७४ माघ २९ गते ९:३५ मा प्रकाशित
नयाँदिल्ली । पेप्सीकी अध्यक्ष तथा सिइओ इन्दिरा नुयीलाई क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) ले पहिलो स्वतन्त्र महिला निर्देशक नियुक्त गरेको छ । उनले यसै वर्षको जुनदेखि आएसिसीमा काम सुरु गर्नेछिन् । पेप्सी अहिले १० लाख करोडको कम्पनी हो । इन्दिरालाई यहाँ वार्षिक ३० मिलियन डलर (भारु १ सय ९३ करोड) पारिश्रमिक दिइन्छ ।
यन्दिरा नुयीको जन्म तमिलनाडुको एक मध्यम वर्गीय परिवारमा भएको थियो । उनका पिता बैंकमा काम गर्थे र माता दुवै छोरीको रेखदेख गर्थिन् । इन्दिराकी बहिनी चन्द्रिका म्युजिक उद्योगमा लागेकी छन् र उनी २००१ मा ग्रेमी अवार्डका लागि नोमिनेट भएकी थिइन् ।
इन्दिराकी आमा वेलावेला छोरीहरूलाई सोध्ने गर्थिन्, ‘ठूलो भएर तिमीहरू के बन्छौ ?’ दुवै छोरीमध्ये जसले राम्रो जवाफ दिन्थिन्, उनले पुरस्कार पाउँथिन् । आमाले यसो गर्नुको कारण थियो, छोरीहरूले राम्रो काम गर्ने कुरा सोचून् र जीवनमा ठूलो काम गर्ने सपना देखून् । कलकत्ताबाट व्यवस्थापनमा स्नातक गरेपछि इन्दिराले केही समय जोन्सन एन्ड जोन्सन र अन्य कम्पनीमा काम गरिन् ।
पारिश्रमिकबाट आएको रकम जम्मा गरेर अमेरिका गएर स्नातकोत्तर गर्ने उनको इच्छा थियो । राम्रो अंक भएकाले उनले येल युनिभर्सिटीमा भर्ना त पाइन्, तर शुल्क तिर्न पैसा थिएन । शुल्क तिर्ने पैसाको जोहो गर्न आधा दिन अर्थात् रातको १२ देखि बिहानको ५ बजेसम्म रिसेप्सनिस्टको काम गर्थिन् ।
माझी बालबालिकालाई माछापुच्छ्र्रे वैकद्धारा पोषाक सहयाेग